गुन्यु–चोलीको आधुनिक फर्म्याट - Naya Patrika
गुन्यु–चोलीको आधुनिक फर्म्याट
काठमाडौं, ३१ जेठ | जेठ ३१, २०७५
पछिल्लो समय गुन्यु–चोलीको प्रयोग निकै बढेको छ । खासगरी परम्परागत लुक्स दिनका लागि गुन्यु–चोलीको अत्यधिक खोजी हुन थालेको छ । यसलाई आधुनिक रूप दिएर प्रयोग गर्नेहरूको संख्या पनि त्यस्तै छ । त्यसैको परिणाम हो कि कैयौँ बुटिकमा सबैभन्दा बढी अर्डर गुन्यु–चोलीकै आउने गरेको पाइन्छ । गुन्यु–चोलीलाई कसरी लुक्स दिन सकिन्छ त ? फेसन डिजाइनर श्वेता आचार्यले बताएकी छिन् :
परम्परागत गुन्यु–चोलीको आफ्नै फम्र्याट छ । यसको सामान्य आकारमा बनाइन्छ । जसलाई टेलर सेट पनि भनिन्छ । त्यही गुन्यु–चोलीलाई बुटिकले आधुनिक लुक्स दिने गर्छ । खासगरी फेसनेबल डिजाइन गरी शरीरको नापअनुसार फिटिङ रूपमा तयार पारिन्छ, जसरी रबरको पन्जा हातमा बस्छ ।
यसरी गुन्यु–चोली तयार पार्दा परम्परागत आधारमा त्यति धेरै अन्तरचाहिँ हुँदैन । भित्रबाट तुना बाँधेर लगाउने गरी तयार पार्ने हो । खासगरी पहिले सामान्य सुतीको कपडामा यस्तो ड्रेस तयार पारिन्थ्यो र गुन्यु–चोली नै लगाउने गरिन्थ्यो । तर, अहिलेचाहिँ विभिन्न आकर्षक कपडाको प्रयोगमा एन्ड्रोइटी गरी तयार पारिन्छ । र, यसलाई गुन्युमै मात्र लगाउनुपर्छ भन्ने छैन ।
पछिल्लो समय मखमल र सिल्कको कपडाको चोली सिलाउने प्रचलन बढ्दो छ । चन्डेरी सिल्कको कपडामा पनि अत्यधिक सिलाइन्छ । र, त्यसमा बुट्टा बनाउने प्रचलन छ ।
र, गुन्यु तथा चोलीमा बुट्टा भर्ने काम पनि गरिन्छ । यस्तो बुट्टाका लागि विशेषगरी गोल्डेन कलर प्रयोग गरिन्छ । यसका साथै रातो र ओरेन्ज, ब्ल्याक, मरुन आदि कलर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, बुट्टाका लागि ढाकाकै सेट, पेन्ट पनि पाइन्छ । जसलाई हातले बुनेर पनि बनाउनुपर्छ । त्यसैको प्रयोग गरिन्छ ।
अहिले लेहेंगा र सारीमा चोली लगाउने प्रचलन अत्यधिक बढेको छ । यसले परम्परागत र फेसनेबल लुक्स दिनका लागि सहयोग पु¥याउँछ ।
विशेष सारीमा ब्लाउजको सट्टा चोली गर्ने प्रचलन बढेर गरेको छ ।
बेहुलीको कपडामा पनि यस्तो चोली लगाउने प्रचलन छ । यसलाई रोयल लुक्सका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
कस्तो रङको तयार पार्ने ?
यसमा रङको कुनै दायरा छैन । खासगरी ग्राहकको रुचिअनुसार जुनसुकै रङमा तयार पार्न सकिन्छ ।
चोलीमा अलि बढी प्रयोग हुने भनेकोचाहिँ रातो, रानी कलर हो । बेहुलीका लागि रातो रानी, ओरेन्जको बढी प्रयोग गरिन्छ ।
नियमित र अकेजनल्ली प्रयोग गर्नका लागि भने पेसल सेटको प्रयोग हुन्छ । त्यो भनेको लाइट ग्रिन, लाइट पर्पल इत्यादि । गुन्युमा पनि यस्तो रङ प्रयोग गरिन्छ ।
पटुकाको सट्टा पेटी
पहिले गुन्युमा पटुका बाँध्ने चलन थियो । तर, अहिले आएर यो ट्रेन्ड परिवर्तन भएको छ । पटुकाको सट्टामा बेल्ट प्रयोग गरिन्छ । त्यही आकारमा बेल्ट तयार पारी बेल्ट प्रयोग गरिन्छ ।
कति उमेरका लागि ?
यस्तो ड्रेस जुनसुकै उमेरका महिलाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । बच्चादेखि बूढीसम्मका मानिसले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
तर, पछिल्लो समय युवतीभन्दा पनि मिडिल एजका महिलाले यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ । खासगरी २६ देखि ४५ वर्षसम्मका महिलाले अत्यधिक प्रयोग गर्छन् ।
यसको प्रयोग नियमित पनि गर्न सकिन्छ । यद्यपि पार्टीवेयर, कल्चरल कार्यक्रममा यसको बढी प्रयोग गरिन्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा या कुनै औपचारिक कार्यक्रममा समेत यसको प्रयोग गरिन्छ ।
आठ वर्षीय बालकको पेटमा ७ सय ग्राम जुका
यसरी लाग्छ मानिसलाई रोग